लकडाउनको घोषित अवज्ञा, सरकारमाथि विश्वासको सङ्कट ? | Ratopati
personसीपी गजुरेल exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २३, २०७७ chat_bubble_outline0
नेपालमा २०७६ साल माघ ९ गते एकजनामा देखिएको थियो कोरोना भाइरस । लगभग ३ महिनासम्म त खासै जोखिमको अवस्थासम्म पनि पुगेको थिएन । यसलाई एक प्रकारको वरदानका रूपमा लिएर भविष्यमा आउन सक्ने महामारीसँग जुध्ने तयारी गर्न सरकारलाई सबै पक्षबाट घच्घच्याउने काम पर्याप्त मात्रामा भएको हो । तर सरकारको ध्यान त्यतातिर जाँदै गएन । सरकार त भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका कान्डहरुमा यस्तो किसिमले फस्यो कि महाव्याधीसँग जुध्ने तयारी त कता हो कता ? प्रधान मन्त्रीजीको ‘भ्रष्टाचार म आफू पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने भनाइ त नेपाली समाजमा एउटा राम्रो हँसीमजाक बन्न गयो । मन्त्रीहरु नै ‘कोरोनाले हामी नेपालीलाई केही गर्दैन, ढुक्क भए हुन्छ’ भनेर जनतालाई मक्ख पारेर भाषण गर्दै हिँडे । जनतालाई सचेत र सजग गर्ने काम पनि पर्याप्त मात्रामा भएन । रोगको परीक्षण, उपकरण, उपचार सामग्री, औषधिको व्यवस्था र तयारी खासै हुनै सकेन । त्यति राम्रो सुनौला अवसर गुम्यो, सरकारकै कारणले ।
पछिल्लो चरणमा आएर नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित हुनेहरुको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । प्रमुखरूपमा यसका चारवटा कारणहरु हुन् भन्ने लाग्द छ ः पहिलो, सङ्क्रमित हुनेहरुको पहिचान गर्नका लागि आवश्यक परीक्षण अत्यन्त कम भयो । दोस्रो, भारत सरकारले नेपाल आउने मानिसलाई सिमानामा ल्याएर छाडिदिएपछि लुकीछिपी पस्नेको हुललाई नेपालमा व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकेन । तेस्रो, पछिल्लो चरणमा निर्णय नै गरेर १ लाख २५ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई जाँच नै नगरीभित्र ल्याउने काम भयो । चौथो, भित्र ल्याएर उपयुक्त क्वारेन्टिनमा राख्ने काम भएन । उपरोक्त कारणहरुले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कल्पनै नगरेको ढङ्गले बढिरहेको छ । प्रधान मन्त्री केपी ओलीजीको ‘सङ्क्रमितको सङ्ख्या २०० भन्दा बढ्न दिइँदैन’ भन्ने भनाइ वकवास मात्र सावित भयो । यी हरफहरु लेखिँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या २३१६ पुगिसकेको छ । यसले अब महामारीको रूप लिन लागेपछि सर्वत्र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।
सरकार उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आभास :
बिरामीहरुको सङ्ख्या वृद्धिको दर तीव्ररूपमा बढेको हुनाले सामान्य र मध्यम किसिमका लक्षण देखिएका बिरामीहरुलाई अस्पताल भर्ना नगरिने, आफ्नै घरमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने भन्ने हालै स्वास्थ मन्त्रीले जारी गरेको बयानले जनतामा अर्को त्रास फैलिएको छ । आईसीयू बेडहरुको एकदम कमी छ, कोभिड अस्पतालहरुको कमी छ भन्ने कुरा विज्ञहरुबाट निरन्तर औँलो ठड्याउने काम भइरहेको छ । यो स्थितिमा सरकारबाट भएको यस प्रकारको निर्णयले सरकार अब बिमारीहरुको उपचारको जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोजेको भन्ने भय जनतामा फैलिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीको कर बुझाउ भन्ने कडा आदेश :
महामारीको पीडा र लकडाउनका कारणबाट पैदा भएको चरम आर्थिक सङ्कटमा सरकारसँग राहतको अपेक्षा गरिरहेका वर्ग र समुदायलाई अर्थमन्त्रीको यो फरमानले आक्रोशित बनायो । उनीहरुको सरकारप्रतिको आसा, भरोसा सबै हरायो । बाँच्नका लागि जे पर्लापर्ला भन्ने सोचेर उनीहरु यो निर्णयमा पुगे ।
क्वारेन्टिनको दूरावस्था :
लकडाउनको अवधिमा सबैले अपेक्षा गरेका थिए कि तीनवटै अङ्गका सरकारहरुको समायोजनबाट क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था हुने छ, जसले कोभिड १९ लाई फैलिनबाट रोक्ने छ । रोग पत्ता लागेकाहरुको सहज उपचार हुने छ । भैँसी गोठमा, खुला चौरमा, भुइँमा, एउटै बन्द कोठामा ४० जनासम्म राखिएका, कतिपय ठाउँमा भोकभोकै बस्न बाध्य भएका कथित क्वारेन्टिनको अवस्थाका समाचार भाइरल भए । यसले त क्वारेन्टिन नै कोरोना सार्ने ठाउँ, कोरोनाका गुँड, बिरामी नै नपरेकालाई बिरामी पार्ने कारखाना बन्न पुगेको स्थितिले गर्दा उनीहरुमा आक्रोश पैदा भयो ।
भोकको कारण ज्यान गएको अवस्था :
दैनिक ज्यालादारी गर्ने र तल्लो वर्गका मानिसहरुमध्ये कतिपयको खानै नपाएर भोकको कारण ज्यानै गएका घटना सार्वजनिक भए । तीनै तहका सरकारका निकाय यसमा असफल भएको देखियो । यसबाट सरकारप्रति जनताको वितृष्णा पैदा हुने स्थितिको सिर्जना भयो ।
सत्तामा भएकाहरुको मोज मस्ती :
सरकारका विभिन्न ओहोदामा बस्नेहरुले सरकारी धनको दुरूपयोग गरेर ऐयासी जीवनमा खर्च गरेका विषयले पनि यो परिस्थिति पैदा गर्न भूमिका खेले जस्तो लाग्द छ । राष्ट्रपतिको पहिलेको करिब १५० करोडको हेलिकोप्टर र १८ करोडको कार काण्डको चर्चा त छँदै थियो, त्यसमा अहिले फेरि राष्ट्रपति भवनमै लाखौँको गलैँचा सजाउने काण्ड पनि थपिएको छ । यति नै खेर लाखौँ खर्च गरेर मन्त्रीहरुको जिम खाना बनाउने योजना पनि चर्चामा छ । सबैभन्दा आर्थिक रूपमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशका सभामुखको १ करोड ७४ लाखको कार खरिद काण्डले ‘जन प्रतिनिधि’प्रति घृणा मात्र होइन कर्णाली प्रदेशप्रतिको सहानुभूतिमै कमी ल्याउन खोजेको छ ।